किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक ट्रयाक खोल्न १४ किलोमिटर बाँकी – Nepali online news portal
किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक ट्रयाक खोल्न १४ किलोमिटर बाँकी
- भविन कार्की
३ भाद्र २०७७, बुधबार १७:५७ August 19, 2020 पाथिभरा संवाददाता
किमाथाङ्का– बहुप्रतिक्षित किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य दुई वर्षदेखि बन्द छ ।
सङ्खुवासभाको खाँदबारीबाट एक सय ३४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले जनाएको छ । चीनको सिमाना किमाथाङ्का जोडिन अब १४ किलोमिटर मात्र बाँकी छ । यो सडकको चेपुवा, छुमसुर घोङगोप्पा खण्डमा ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । ती ठाउँमा ठूला चटान र पहाड रहेकाले विस्फोट गरी मात्र ट्रयाक खोल्न सकिने आयोजनाले जनाएको छ ।
जोगवनी किमाथाङ्का सडक विराटनगरको रानीदेखि सङ्खुवासभाको किमाथाङ्कासम्म ३ सय ४० किलोमिटर लामो छ । सङ्खुवासभाको खाँदबारीदेखि किमाथाङ्काको दूरी १६२ किलोमिटर छ । जसमा च्याम्पाङदेखि घोङगोप्पासम्मको १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । ठूला चटान र पहाडका कारण निर्माण कम्पनीले ट्रयाक खोल्न नसकेपछि उक्त कार्य सेनालाई दिने भनिए पनि हालसम्म त्यसको काम शुरु हुन सकेको छैन ।
चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक मार्ग किमाथाङ्का–विराटनगर–रानी सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको हो । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्ड दुई वर्षदेखि काम रोकिँदा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । खाँदबारी–किमाथाङ्का सडकखण्डको एक सय ६२ किलोमिटर सडकमध्ये १४ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक आयोजनाका प्रमुख गौतम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसैगरी किमाथाङ्का नाकाबाट पनि यस अघि नै १४ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोलिसकेको छ । दुई वर्ष पहिले नै घोङ्गोप्पासम्म सडक मार्ग खुलेपनि त्यसको संरक्षण नहुँदा पहिलेकै अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकबाट तिव्बत हुँदै डोजर र इन्धन ल्याएर किमाथाङ्काबाट १४ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । शर्मा÷एपेक्स÷कान्छाराम कम्पनीले ट्रयाक खेल्ने ठेक्का लिएको किमाथाङ्कादेखि १९ किलोमिटर (१६२ देखी १४३ किलोमिटर) सम्मको सडकमध्ये १४ किलोमिटर दुई वर्ष पहिले नै सम्पन्न गरेको थियो । ट्रयाक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिएपनि काम शुरु नभएपछि सङ्खुवासभावासी निराशा बनेका छन् ।
त्रिदेशीय लिकंरोड किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्डको भिर फुुटाउने जिम्मा सेनालाई दिने निर्णयपछि १४ किलोमिटर क्षेत्रको जिम्मेवारी आफ्नो कार्यालयको नरहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोझै सेनासंग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउने भएकाले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ट्रयाक खोल्नका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थ राख्ने बङ्कर निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । च्याम्ताङदेखि घोङगोप्पासम्म १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने कार्यले प्राथमिकता नपाउँदा छिमेकी मुलुक चीन–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक (किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्ड) ओझेलमा परेको छ ।
सडक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि शुरु भएको थियो । उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक कार्यालयले यो सडकलाई विभिन्न ७ खण्डमा विभाजन गरी ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नतीको काम ठेक्कामार्फत शुरु गरेको थियो । च्याम्ताङदेखि घोङगोप्पासम्म १४ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । २०७६ भदौ २२ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्डको १४ किलोमिटर भिर फुुटाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।
च्याम्ताङसम्म ट्रयाक खोले पनि खाँदबारीबाट बरुण दोभानसम्म (८० किलिमिटर) सडकखण्डमा हिउँदमा यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ । वर्खायाममा फ्याक्सीन्दासम्म मुुस्किलले यातायत सञ्चालन हुन्छ । यसरी सडक निर्माण र किमाथाङ्का सडक विस्तारसँगै त्यसक्षेत्रमा चहलपहल बढेपनि किमाथाङ्का नाका भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सडक विस्तारसँगै यहाँ भन्सार कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
नेपालकै दुई मित्रराष्ट्र चीन–भारत जोड्ने छोटो सडकको रुपमा रानी विराटनगर देखि किमाथाङ्का सडकलाई लिइन्छ । सडक विस्तारले मित्रराष्ट्र चीनसँग व्यापार बढाउने र जिल्लाका उत्तरी भेगका नागरिकले यातायात तथा अन्य सुविधा पाउने छन् । यो सडकबाट एक नम्बर प्रदेशका मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरवासी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । किमाथाङ्का नाका चीनसँग जोडिने सबैभन्दा होचो र मानवबस्ती रहेको नाका मानिन्छ ।
नौ पुल निर्माणका क्रममा
नुमदखि बरुण दोभानसम्म ९ वटा ‘सडक पुल’ निर्माणकोे क्रममा छ । अधिकांश पुल मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) नगरी ठेक्का लगाएकाले समयमा काम सम्पन्न हुन सकेन । निकुञ्ज क्षेत्रभन्दा वाहिर रहेका फाक्रे खोलाको पुलको काम समेत ५० प्रतिशत मात्र सम्पन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नै यी सबै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । एकुवा खोला, ठाडो खोला र उवा खोलामा पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म पनि शुरु हुन नसकेको आयोजनाका सूचना अधिकारी आशिष नेपालले जानकारी दिए । नाङ, चाङ, जोर, उवाङ् र वाङ् खोलाको पुलको प्रगति पनि न्यून रहेको उनको भनाइ छ । इआइए नगरी ठेक्का प्रक्रियामा गएका कारण निकुञ्जले काममा वाधा पुर्याएकाले पुल निर्माणको काम ढिलाई भएको उनले बताए । यस सडक खण्डमा १८ वटा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
६५ प्रतिशत काम सम्पन्न
खाँदबारी–किमाथाङ्का (१६२ किमि) सडकअन्र्तगत गत आर्थिक वर्षसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उत्तर दक्षिण (कोसी) सडक आयोजनाका प्रमुख गौतमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ट्रयाक खोल्ने बाहेक सडक स्तरोन्नती, चौडा बनाउने, सव वेस तयार र पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । अधिकांश ठेक्काको समय गत आर्थिक वर्षमा सकिएका छन् । दुई पटकसम्म समय म्याद थप गर्दा पनि ती पुलको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा रु ८४ करोडमध्ये रु ५४ करोड ५० लाख मात्र खर्च भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी नेपालले जनकारी दिए । भुक्तानी हुन अझै बाँकी रहेकाले यस महिनाको अन्त्यसम्म थोरै खर्च रकम बढ्ने उनको भनाइ छ । चीन र भारत जोड्ने सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का नाका सबैभन्दा छोटो नाकाको रुपमा रहेको छ । अहिलेसम्म यो सडकखण्डमा रु तीन अर्ब खर्च भइसकेको बताइएको छ ।
सामसुङको आम्दानी २९ प्रतिशतले घट्यो अब के होला ?
चिउरी खोज्दै पहाड हिँडे मौरी किसान
सिटिजन्स बैंकको चौधौं वार्षिक साधारण सभा मंसिरको २० गते हुने
टिकोला झारेपछि चिन्तित
कोम्यान बने बार्सिलोनाको मुख्य प्रशिक्षक
१धुम्बाराहीमा एमालेको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड राखिने
२भारतमा एकैदिन १५ हजार ३५३ जनामा संक्रमण
३तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
४पेस्तोलसहित नवलपरासीबाट दुईजना पक्राउ
५देशको विभिन्न स्थानबाट पाँचजना मृत फेला
६उमेश र दिक्क्षाको अभिनयमा ‘तिम्रो सरीर’ बजारमा
७प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीसँगै अघि बढ्छु : मणि थापा
८एकैदिन देशभर थप ८९ जनामा कोरोना पुष्टि
३यस्ता छन् दम रोगबाट जोगिने घरेलु उपायहरु
४घुस लिएको आरोपमा सवइन्जिनियर पक्राउ
५यस्तो छ तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
६गुल्मीकी २२ वर्षीय सम्झना बोहोराको हत्यारालाइ प्रहरीले ग–यो सार्वजनिक
७पार्टीको विवाद छिटो टुंग्याउन माग गर्दै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु पुगे निर्वाचन आयोग
८यति थोरै जेल बसेर छुट्न पाए पो हुन्थ्यो, आफू त १४ वर्षमात्र बसियो : ओली